Fampitaovana ny mpianatra Malagasy :: Nosantarin’ny Filoha ny fizaràna kojakojam-pianarana tena raitra • AoRaha
Fampitaovana ny mpianatra Malagasy Nosantarin’ny Filoha ny fizaràna kojakojam-pianarana tena raitra
Hiavaka tanteraka tamin’ny fanao hatramin’izay ny fampitaovana maimaim-poana an’ireo mpianatra eo anivon’ny sekolim-panjakana manerana ny Nosy. Sady hanamaivana ny fahasahiranan’ireo ray aman-dreny manoloana ny fahalafosan’ny fitaovam-pianarana, ny fanomezana kojakojam-pianarana (kits scolaires) nosantarin’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, teny Ampefiloha, omaly, no hiavaka amin’ny kalitao sy ny votoatiny indrindra koa.
Rakibolana sy kahie, « tablettes » miaraka amin’ny fanamiana ary fanomezana fanampin-tsakafo no natolotra an’ireo mpianatra, etsy amin’ny Epp Ampefiloha Ambodirano.
Kojakojam-pampianarana isan’ny manara-penitra ilay Rakibolana ahitana takelaka 802. Voambolana maro, amin’ny teny malagasy sy amin’ny fiteny frantsay no voarakitra ao anatin’izany. Votoatin-teny miisa dimy arivo sy iray alina, misy sary mihoatra ny dimanjato ary tahirin-kevitra mikasika an’ireo firenena maneran-tany no hita ao amin’ireo pejin’ity boky lehibe ity. Misy fehin-teny nataon’ny Filohan’ny Repoblika, mikasika ny velirano momba ny fampianarana sy ny kolontsaina, any amin’ny takelaka fiandohan’ny Rakibolana.
Nohitsian’ny Filoham-pirenana fa: “tsy hitombo fahalalana mihitsy ny ankizy malagasy raha tsy hary fitaovana”. “Ahoana no hahafahana mampitombo fahalalana raha tsy manana fitaovam-pianarana izy ireo. Isan’ny mahafinaritra ahy indrindra tamin’ireo velirano nataoko tao anatin’ny herintaona nitondrako ny fahavitan’ity Rakibolana ity. Manamarika ny tantaran’ny fiainan’ny firenena izany ary atolotra ny mpianatra sy ny sekoly rehetra manerana ny Nosy”, hoy izy.
Natokana ho an’ny rehetra fa tsy ho an’ny mpianatra irery ihany io Rakibolana io. Hisitraka an’izany koa ny isantokantrano. Misy fizarana telo miavaka tsara izany, ka ny tapany voalohany amin’ny teny malagasy, ny tapany faharoa amin’ny teny frantsay ary ny tapany fahateo dia mirakitra ny tantaran’ ireo firenena maneran-tany.
Orinasa eto an-toerana no namokatra an’ireo fitaovam-pianarana raitra ireo, satria lafo rahateo ireo avy any ivelany. Vitsy ireo fitaovam-pianarana vokarina eto an-toerana satria sehatra nilaozan’ny mpandraharaha noho ny hamafin’ny fifaninanana amin’ireo entana avy any ivelany ity seha-pamokarana iray ity.
Misongadina sady maneho ny fiarovana ny hambompom-pirenena, ankoatra ny fanomezana tombon-dahiny ny orinasa malagasy, ny fisian’ny tonon’ny hiram-pirenena ao amin’ireo kahie natolotra ho an’ny mpianatry ny Epp etsy Ampefiloha Ambodirano.
Tetsy an-daniny, nampihantain’ny Filoha tamin’ny alalan’ny fandoavana ny saram-pianaran’izy ireo, ny fanomezana kiraro ary ny mbola hanomezany fanamiana sady hanorenana trano fisakafoanana ho an’ny ankizy mianatra eny Ambodirano Ampefiloha izao tan-tsoroka ho an’ny mpianatra malagasy izao.
Fifidianana sy fanompoana vahoaka :: Vao kandidà fito amby roapolo eto Antananarivo no nanasonia ny teny ierana